मनोरोग मा Electroconvulsive उपचार। सङ्केत गर्छ, प्रभाव
स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य
आज, धेरै electroshock वा electroconvulsive चिकित्सा रूपमा उपचार को यो विधि को सुनेको छु। यो प्रक्रिया फिल्म नराम्रो नाम छ कारण छ। तर तरिका कुराहरू तिनीहरूले उहाँको बारेमा भन्न रूपमा उपचार यस प्रकारको, खतरनाक र यति भयावह छ कि छैन भनेर वा छैन, वास्तवमा छन्?
electroconvulsive चिकित्सा लगे जब, विभिन्न शक्ति वर्तमान मार्फत बिरामीको मस्तिष्क पारित गरिएको छ - 200 1600 मा milliamps देखि। यसको भोल्टेज 400. गर्न 70 वोल्ट जोखिम अवधि केही सेकेन्ड भन्दा बढी छैन छ, सेकेन्ड अंश अक्सर सीमित छ। यी दलहन दौरा शामिल ट्रिगर। तर यो तनाव को वितरण खुराक रोगी प्रतिक्रिया निर्भर व्यक्तिगत हो भनेर टिप्पण लायक छ। उहाँले 25 सेकेन्ड को एक जफती अवधि छ भने सत्र सफल छ। को इलेक्ट्रोड दुवै पक्षले मन्दिर यो उपचार पूरा गर्न स्थापित छन्। कहिलेकाहीं तिनीहरूले अगाडि र टाउको को फिर्ता मा माउन्ट छन्। विद्युत impulses सामान्यतया केवल मस्तिष्क को एक पक्ष मार्फत अनुमति छन्। विभिन्न निदान मा मस्तिष्क को स्कोप परिवर्तन किनभने इलेक्ट्रोड स्थान, मानव रोग निर्भर हुनेछ।
प्रक्रिया अघि, रोगी अस्थायी रूपमा सम्पूर्ण पेशी प्रणाली paralyzes एक दबाइ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यी उपाय रोगी मस्तिष्क मार्फत बिजुली को खण्ड को समयमा आफ्नो हड्डी भङ्ग छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन्। यो ect सम्पूर्ण जीव को गंभीर हल्लाउने-अप गराउँछ भन्ने संकेत गर्छ। साथै, सत्र आवश्यक अन्तर्गत प्रदर्शन सामान्य एनेस्थेसिया।
तर यस्तो आघात कारण गर्न, विशेषज्ञहरु मात्र बिजुली छन्। चिकित्सकीय उद्देश्यका लागि प्रयोग inhalants ग्याँस र रासायनिक हालतमा (subcutaneously एक सुई संग प्रबन्ध) (संरचना मुखौटा मार्फत inhaled छ)। यी लागूऔषधको प्रभाव विद्युत प्रतिरोध छ। विशेषज्ञहरु उपचार दौरा शामिल को समयमा आघात को एक राज्य हो, र तिनीहरूले भनिन्छ के विधि (मास्क, सुई वा आघात मार्फत) कुनै कुरा भन्छन्।
किन यो उपचार पूरा?
1938 मा उहाँले पागलपन को छुटकारा रही एक विधि रूपमा electroconvulsive चिकित्सा प्रस्ताव थियो। साथै, यो प्रक्रिया केही अन्य ग्रस्त गर्ने विरामीहरु मदत गर्ने लक्ष्य लिएको छ मानसिक रोग। तर वर्ष यो उपचार को यो विधि पागलपन को मामला मा प्रभावकारी छैन भन्ने स्पष्ट भयो, तर यो doldrums मा राम्रो परिणाम दिन्छ। केही डाक्टर विरामीहरु को लगभग 75% आफ्नो रोग को लक्षण देखि एक स्वागत रिकभरी प्राप्त किनभने यी मनोरोग विकारहरु को छुटकारा रही यस विधि, सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्छन्।
आचरणको उपचारको लागि सङ्केत गर्छ
त्यहाँ प्रस्ताव उपचार को एक पाठ्यक्रम पकड जो धेरै अमेरिका छन्। तर यो सबै चार प्रक्रिया आपतकालीन आधारमा electroconvulsive उपचार गर्न तोकिएको छ जसमा, मानसिक विकार को प्रकार मा लेखिएको छ। यी समावेश:
अवसाद, जुन बेलामा आत्महत्या लागि insatiable इच्छा र आत्म-चोट पीडा दिनु इच्छा प्रकट गर्नुभयो।
सर्त जो रोगी हठी पानी वा खाना प्राप्त गर्न इन्कार।
न्यूरोलेप्टिक घातक सिंड्रोम।
तर जसको लागि electroconvulsive चिकित्सा सिफारिस हुन सक्छ अन्य सङ्केत गर्छ छन्, तर यी अवस्थामा प्रक्रिया एक योजना तरिका गरिनेछ। यसबाहेक, उपचार को यो विधि मात्र मनोरोग मा, तर पनि दबाइ र स्नायविक क्षेत्रहरू (जस्तै, मिर्गी, दुखाइ syndromes) मा प्रयोग गरिएको छ।
अक्सर निराश लागि electroshock उपचार गर्न। यो रोग विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रहरु बीचको hyperactive सिगनल विनिमय कारण छ कि स्थापित गरिएको छ। तसर्थ, उपस्थित डाक्टर उद्देश्य यी सम्बन्ध खलबल्याउन र सामान्य चयापचय पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। बिजुली impulses कारण दौरा शामिल छ, मुड लागि जिम्मेवार मस्तिष्क को भागहरु बीच hyperactive लिंक को संख्या घटाउन विश्वास छ एकाग्रता र सोचाइ।
उपचारका लागि तयारी गर्दै
उपचार को यो विधि प्रक्रिया, तपाईं निम्न कदम प्रदर्शन गर्न आवश्यक:
रोगी को स्नायविक र शारीरिक अवस्था पूर्ण अध्ययन।
यो एक साधारण रगत र मूत्र परीक्षण छ। केही अवस्थामा, जीव रसायन रगत विश्लेषण थप विस्तार प्रदर्शन।
संज्ञानात्मक समारोह Assesses।
यो हृदय प्रणाली जाँच र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अध्ययन।
रोगी को अनुमानित लोकोमोटर प्रकार्य।
पनि उपचारको लागि विरामीहरु स्वीकार त्यस्तो खाना सेवन को समाप्ति रूपमा केही अन्य घटनाहरू, र केही औषधि को एक नम्बर आयोजित।
साथै, मनोरोग मा electroconvulsive चिकित्सा लागू छ लोकप्रिय विश्वास विपरीत, प्रक्रिया मात्र उपस्थित दल को सहमति अगाडि बढ्नुहोस्। रोगी व्यक्तिगत यस्तो निर्णय लिन र एक विज्ञप्ति फारम हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। तर कहिले काँही मानसिक स्थिति अत्यन्तै कठिन छ, र उहाँले मेरो जवाफ दिन सक्षम थियो। यस मामला मा, नजिकको नातेदार वा संरक्षकको प्रक्रिया गर्न सहमत हुन सक्छ। तर निर्णय निष्कर्ष दिन गर्ने डाक्टर को एक परिषद जाँदै, न्यायसंगत थियो।
उपचार को आवृत्ति
यो मनोरोग मा electroconvulsive उपचार धेरै सत्र समावेश एक पाठ्यक्रम द्वारा लगे छ कि ज्ञात छ। आफ्नो आवृत्ति देश र क्लिनिक, जसमा उपचार आधारमा फरक छ। सामान्यतया एक हप्ता रोगी बाहिर दुई वा तीन सत्र लगे छ। पाठ्यक्रम को अवधि औसत चार हप्ता मा छ। केही विरामीहरु मा, सुधार धेरै पहिले हुन्छ, र कहिले काँही यो पर्याप्त बस दुई हप्ता छ। कहिलेकाहीं सुधार चिकित्सा को पनि पछि 20 पटक उत्पन्न भएन। तर पहिलो 12 सत्र जमीन बन्द राज्य loosened छैन भने देखेको छ, यो विधि द्वारा त्यसपछि थप उपचार असफल।
उपचार को यो विधि एक कार्डिनल छ, र उहाँले, पाठ्यक्रम, त्यहाँ प्रारम्भिक र लेट हो कि साइड इफेक्ट छन्। पहिलो मामला disturbances मा एक सत्र को अन्त पछि वा समयमा तुरुन्तै आउँदैन। यी जो विशिष्ट लागूऔषधको परिचय द्वारा प्रक्रिया को तत्काल अवरोध आवश्यक दीर्घ अस्वाभाविक फिट समावेश। पनि tachycardia सत्र समयमा देखा पर्न सक्छन्। यसबाहेक, प्रतिक्रिया एनेस्थेसिया वा उपचारको लागि प्रयोग अन्य लागूपदार्थ हुन सक्छ। यो apnea को फारम (साँस को समाप्ति) मा प्रकट भएको छ।
प्रारम्भिक प्रभाव बाहेक जो हल्का painkillers को मद्दतले निर्मूल गर्न सकिन्छ प्रक्रिया, पछि टाउको दुखाइ समावेश गर्नुहोस्। दबाब मा हुन सक्छ उत्तेजना, वाकवाकी, परिवर्तन, एक रोग राज्य, साथै को जफती पछि भ्रम, बिस्तारै कम छ। तर तिनीहरूले प्रत्येक साधारण सत्र संग परिलक्षित गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दो परिणाम हृदय आक्रमण र मृत्यु समावेश गर्नुहोस्।
लेट साइड इफेक्ट धेरै प्रक्रियाहरु पछि, एक बेला पछि देखिन्छन्। electroconvulsive चिकित्सा बाहिर छ, जबकि तिनीहरू, वर्षैभरि बढ्न सक्छ। नतिजा, पहिले नै उल्लेख रूपमा, दीर्घकालीन भ्रम को रूप मा प्रकट गर्न सकिन्छ। यो पनि आंशिक स्मृति लोप वा सोचाइ समस्या हुन सक्छ।
लामो समय को लागि यस प्रक्रिया अनिवार्य मस्तिष्क हानि पुऱ्याउँछ एउटा राय थियो। तसर्थ, अध्ययन के स्मृति गर्दा electroconvulsive चिकित्सा मिट छ पत्ता लगाउन सञ्चालन, र सोही ठाउँ मा कुनै पनि विकार गरिएको छ। यो उल्लङ्घन बारे छैटौं सत्र पछि देखा पर्न सुरु कि फेला परेन। यस मामला मा, स्मृति लोप फरक चरित्र हुन सक्छ। कहिलेकाहीं रोगी बस उहाँले यो विधि द्वारा उपचार भएको थियो, र अन्य अवस्थामा नमूना द्वारा भेट्यो थियो सम्झना छैन स्मृति हानि। उदाहरणका लागि, व्यक्ति नाम वा अन्य विवरण सम्झन सक्षम थियो। तर यी सबै उल्लंघन मात्र एमआरआई मा चिकित्सा अघि subcortical सेतो कुरा घाउ अत्यधिक तीव्रता लिपिबद्ध थिए ती विरामीहरु संग भयो। सामान्यतया, केही हप्तापछि यी विरामीहरु को स्मृति पूर्ण, केही अझै पनि आफ्नो जीवन घटनाहरू भाग सधैंभरि मिट गरिएको उल्लेख हुनत बरामद।
त्यहाँ कुनै पनि contraindications छन्
प्रश्न कारण, केही अवस्थामा, electroconvulsive चिकित्सा अस्वीकार्य छ भनेर साइड इफेक्ट को एक नम्बरमा उत्पन्न हुन सक्छ। Oddly पर्याप्त, तर उपचार को यो विधि लागि निरपेक्ष contraindications, डाक्टर कल छैन। एकै समयमा गर्दा, धेरै डाक्टर किनभने त्यहाँ यी प्रक्रियाहरु रोगी को मृत्यु हुन सक्छ जो अन्तर्गत बिरामीको अवस्था हो, सावधान हुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यी समावेश:
हस्तान्तरण एक myocardial infarction (तीन महिना पारित हुनुपर्छ)।
Intracranial उच्च रक्तचाप।
मस्तिष्क ट्यूमर को उपस्थिति (मूल को रेकर्ड जीनस)।
एनेस्थेसिया गर्न घृणाको सम्बन्धित समस्याहरू।
तर, यो सबै बाहेक, त्यहाँ प्रक्रिया समयमा, तपाईं गम्भीर जटिलताहरू जोखिम कम गर्न थप उपाय लिनुपर्छ जसमा सर्त छ।
आम आत्महत्या: कारणहरू, उदाहरणहरू
ड्रोममेनिया के हो? उपस्थितिको कारण
न्युरोसिस: मनोचिकित्सक भन्दा पनि मद्दत हुनेछ
हामी मनोवैज्ञानिक मद्दत चाहिन्छ?
अक्टोबर 10 - विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
कम्पन, यसको कारण
आर्मेनियाली पठार - एशिया माइनर को उत्तर मा पहाड क्षेत्र। अर्मेनियाई हाइल्यान्ड को क्षेत्रमा एक प्राचीन राज्य
मेक्सिकन नाम: को परम्परा र विशेषताहरु
को माइक्रोवेव र ओवन मा द्रुत cupcakes। छिटो केक नुस्खा
Collie कुकुर। प्रकार कुकुर Collie: फोटो। बौना Collie
बैग "Salome": ग्राहक समीक्षा
समस्या बिना एक परियोजना Zomboid सर्भर कसरी सिर्जना गर्ने
बन्दूक प्लास्टर: यन्त्र, विनिर्देशों र समीक्षा विवरण
लेखक Zaytsev Mihail Georgievich: पुस्तक, जीवनी, रचनात्मकता
टी-शर्ट मा मुद्रण विशेषताहरु
सिस्टम आवश्यकताहरु Hurtworld र खेलको बारेमा संक्षिप्त जानकारी
आफ्नै हातले नर्सरी कार्ड
ग्रीस ठाँउहरु क्रेते - एक स्वर्ग द्वीप